ဂျိုးအ​မ​တေဥ ရှာပုံ​တော်​ ( ဒု _ ပိုင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂျိုးအ​မ​တေဥ ရှာပုံ​တော်​ ( ဒု _ ပိုင်း)
ဂျိုးအ​မ​တေဥ ရှာပုံ​တော်​ ( ဒု _ ပိုင်း)
Posted by မောင်ရိုး on Dec 29, 2013 in Creative Writing | 13 comments
သစ်​​ရွေသူ အလုပ်​သမား ၅​ယောက်​ခန့်​သာရှိ​လေသည်​ ။
ဖထီးနှင့်​ရင်းနှီး​နေသူများဖြစ်​၍ ည​နေစာသူတို့ချက်​​ကျွေး​ပါသည်​ ။
အားနာသဖြင့်​ ပါလာ​သော ငါး​သေတ္တာဗူး တချို့​ပေးခဲ့သည်​ ။ ထမင်းစားပြီး​တော့ သိသိသာသာချမ်းလာ၏ ။ တဲ​ရှေ့တွင်​ဖိုထား​သောမီးပုံအနီးတွင်​ဝိုင်းထိုင်​ကြပြီး ​ရေ​နွေး​သောက်​ရင်း လာရင်းကိစ္စ​ပြောဖြစ်​ကြသည်​ ။
အခုမှသိရသည်​မှာ ဂျိုးအမ​တေဥ ရှာ​သောအဖွဲ့များ​ခြေချင်းလိမ်​​အောင်​ ရှိ​နေကြသည်​ ဟု ။
​လော​လောဆယ်​ဆယ်​ မည်​သူမျှရသည်​ဟူ၍မကြားရ​သေး​ကြောင်း …
အ​ရောင်းအဝယ်​ဖြစ်​​သောဥများမှာလည်း အတုများသာဖြစ်​​ကြောင်း …
လုပ်​ကြံလီဆယ်​ကြ​ကြောင်း သိရ​လေ​တော့သည်​ ။
ကျ​နော်​တို့မှာ ထွက်​လာပြီးဖြစ်​သဖြင့်​ မထူး​တော့သည်​မို့
ရိက္ခာ ​ခြောက်​များမကုန်​မခြင်း ​တောထဲ​နေသွားရန်​ ၊ တတ်​နိုင်​သ၍​ကြိုးစားရှာ​ဖွေရန် ဆုံးဖြတ်​ထားကြ​လေသည်​။
ထို့​ကြောင့်​ ..​နောက်​​နေ့​စော​စောထပြီး စခန်းချရန်​သတ်​မှတ်​ထား​သော
​ဇော်​ဂျီ​မြှောင်​ (​မြှောင်​နာမည်​ တချို့​မေ့​နေပါပြီ) သို့ သွားကြရန်​ဖြစ်​​လေသည်​ ။
ထို​နေရာမှာ ​တောင်​ရိုးနှစ်​ခုကြားတွင်​ရှိပြီး အတန်​ငယ်​ပြန့်​ပျူး၍ သစ်​ကြီးဝါးကြီးများ​ပေါက်​​ရောက်​သည်​ ။ ​တောင်​ကျ​စမ်း​လေးများရှိသဖြင့်​​ရေရနိုင်​သည်​ ။
​တောနက်​ထဲတွင်​သာ​နေကြ၏။ဂျီနှင့်​ ဆတ်​ တချို့တ​လေရတတ်​​သေးသည်​ ။
​မျောက်​အုပ်​များလည်း ရှိ​နေ​သေးသည်​ ။.ကျနော်​တို့စိတ်​ကူးယဉ်​သလို သွားရင်းလာရင်းငှက်​ပစ်​ဖိုးကားမဖြစ်​နိုင်​ခဲ့ပါ။
ထို​ဇော်​ဂျီ​မြှောင်​တွင်​ ​၂ရက်​ ၃ရက်​​နေထိုင်​ပြီး ဂျိုးသိုက်​ထွက်​ရှာကြမည်​ဖြစ်​​လေသည်​ ။
​ဇော်​ဂျီ​မြှောင်​သို့ ည​နေ ၃ နာရီခွဲခန့်​တွင်​​ရောက်​ကြ​လေသည်​ ။
​ရောက်​​ရောက်​ခြင်းမနားနိုင်​ကြ​သေး။.ဖထီးမှ သစ်​ပင်​ကြီးများကိုလိုက်​ကြည့်​ပြီး ယာယီလင့်​စင်​ထိုးဖို့ပြင်​ကြရသည်​ ။ ထိုစဉ်​က သစ်​များဝါးများ​ပေါများလှ​သေးသည်​ဖြစ်​၍
အဆင်​​ပြေ​ချော​မောပါသည်​ ။ ကျ​နော်​တို့​လေး​ယောက်​မှာ ဝါးခုတ်​သူကခုတ်​ ၊ မီးဖိုရန်​ ထင်းရှာသူကရှာ..ဤသို့ဖြင့်​ တစ်​နာရီခန့်​တက်​ညီလက်​ညီလုပ်​ပြီး​သောအခါ
ခတ်​လတ်​လတ်​ သစ်​ပင်​နှစ်​ပင်​ကြားတွင်​ ​၁၂​ပေ ခန့်​အမြင့်​၌်​ အမိုးအကာမပါ​သော လင့်​​စင်​​တစ်​ခုထိူးပြီးခဲ့​လေ၏ ။​နောင်တွင်သိရသည်မှာ ကျ​နော်​အမြင့်​​ကြောက်​ပြီး
သစ်​ပင်​မတက်​တတ်​သဖြင့်​ အနည်းငယ်​နှိမ့်​၍ထိားခြင်​ဖြစ်​သည်​ဟု ။
အကယ်​၍သာ ကျား ရှိခဲ့ပါက မလုံခြုံနိုင်​​ပေ ။ယခု​သော်​ … ​မြွေနှင့်​
သစ်​ပင်​ခတ်​လတ်​လတ်​နှစ်​ပင်​ကို ဝါးထိုး၍ အဆင်​​ပြေသလို​ဆောက်​ထားရ​သောလင့်​စင်​ဖြစ်​သဖြင့်​
တာဇံရုပ်​ရှင်​ထဲက လင့်​စင်​လို​တော့မဟုတ်​ပါ ။
ခ​နော်​ခနဲ့ ရွဲ့တဲ့တဲ့ဖြစ်​​လေသည်​ ။ ​သေခြာသည်​က လှဲအိပ်​လို့အဆင်​​ပြေမည်​မဟုတ်​။ လူ​​လေး​ယောက်​ တပြိုင်​တဲအိပ်​မည်​ဆိုလျှင်​ ပူးကပ်​အိပ်​ရမည့်​အပြင်​ လိမ့်​ကျနိုင်​​ခြေလည်းများ​ပေသည်​ ။
ဖထီးက​တော့ ​နောက်​​နေ့မှ ဒိထက်​​ကောင်း​အောင်​ပြင်​​​ပေးမည်​ ဟုဆိုသဖြင့်​ ကျ​နော်​တို့မှာ လင့်​စင်​ကိုကြည့်​ပြီးစိတ်​ပျက်​ရ​သေးသည်​ ။
မကြာခင်​အ​မှောင်​လာ​တော့မည်ဖြစ်​၍ မီးဖိုတစ်​ခုဖိုခြင်း ၊ ​တောင်​ကျစမ်း၌ ​​ရေဗူးများရေဖြည့်​ခြင်း ၊ ထမင်းမချက်​နိုင်​​တော့သဖြင့်​ ဆန်​ပြုတ်​အိုးပြင်​ခြင်း စ​သည်​တို့ကို လူခွဲ၍လုပ်​ကြရသည်​ ။
ဖထီးလည်း ​ကောင်း​ကောင်းတက်​တတ်​သည်​ ။
မျိုးတင့်​သည်​ပင်​ သစ်​ပင်​တိုင်းလိုလိုတက်​တတ်​ပါသည်​ ။ ကျ​နော်​တစ်​​ယောက်​ကား..
အမြင့်​​ကြောက်​ခြင်း၊ ငယ်​စဉ်​က ပြုတ်​ကျဖူးခြင်းများ​ကြောင့်​ သစ်​ပင်​တက်​ခြင်း၌
ညံ့ဖျင်းလှ​လေသည်​ ။ ထို့​ကြောင့်​ လင့်​စင်​​ပေါ်သို့ကျ​နော်​တက်​ရန်​.ကြိုးတစ်​​ချောင်းချထားရ​လေသည်​.။
​တောစစ်​စစ်​၏အရသာကို စတင်​ခံစားရ​တော့မည်​ဖြစ်​၍ စိတ်​လှုပ်​ရှား​နေခဲ့သည်​ ။
ဆန်​ပြုတ်​မရမှီ ​အဆာ​ပြေ​ရေ​နွေးနှင့်​ပဲ​လှော်​ဝါးပြီး စကားစမည်​​ပြောရင်း
ဖထီး၏ ​တောတွင်းအ​တွေ့အကြုံများကိုမှတ်​သားရပြန်​သည်​ ။
မှတ်မိ​​နေ​သေးသည်​မှာ ဆန်​ပြုတ်​နှင့်​​သောက်​ရန်​အမဲ​ခြောက်​ကို မီးဖိုထဲသို့
ပစ်​ထဲ့လိုက်​မိသဖြင့်​ ကျ​နော့အား ဖထီးက ဆူပူခြင်းပင်​ဖြစ်​သည်​ ။
အ​ကြောင်းမှာ… မီးဖိုထဲသိ်ု့အသားအစအနများနှင့်​ အဆီများကျပြီး
​ညှော်​​ပေလိမ့်​မည်​ ။ထိုအခါ ..သား​ကောင်​ကြီးများလာတတ်​ခြင်းနှင့်​
​တောထဲရှိ မ​ကောင်းဆိုးဝါးများအား လှုံ့ ​ဆော်​သလိုဖြစ်​ခြင်း​ကြောင့်​
ထို့​ကြောင့်​ အသားများကိုမီးကင်​ပါက သံ​ချောင်းတွင်​ထိုးပြီး
မီးဖို​ဘေးမှသာ ကင်​ရမည်​ဖြစ်​​ကြောင်း​ပြော​လေ​တော့သည်​ ။
သို့နှင့်​ … ဆန်​ပြုတ်​လည်းရပြီမို့ ​မှောင်​​မှောင်​မဲမဲ ချမ်းချမ်းစီးစီးတွင်​ ဆန်​ပြုတ်​တစ်​ငုံ​သောက်​လိုက်​..
လင့်​စင်​​အောက်​ မီးပုံ​ဘေးတွင်​ အားရပါးရ​လွေးခဲ့ရဖူး​လေသည်​ …။
စားပြီး​သောက်​ပြီးသည်​နှင့်​ မီးပုံထဲသို့ ထင်းတုံးကြီးကိုဖြည့်​ပြီး
လင့်​စင်​​ပေါ်တက်​ကြသည်​ ။ ​အောက်​မှာတုန်းက မီးအရှိန်​ဖြင့်​မ​အေး​သော်​လည်း လင့်​​ပေါ့်တွင်​
​လေ​အေးများတိုးသဖြင့်​ ချမ်းပါ​တော့သည်​ ။
အ​​အေးဓတ်​ကိုခံနိုင်​ရုံမျှသာ…။ ​ရေ​ဗူးထဲမှ ​ရေ​နွေးပူပူများကို ​သောက်​ရင်း လင့်​စင်​ထက်​ကစကားဝိုင်းမှာ
ကဗျာမဆန်​​သော်​လည်း ယခုတိုင်​အမှတ်​ရ​နေ​သေးသည်​ ။
ကျ​နော်​တို့တွင်​ သုံး​တောင့်​ထိုးဓာတ်​မီးများကို ကိုယ်​စီကြိုးတပ်​လွယ်​ထားပြီး အ​ရေးအ​ကြောင်းရှိက မည်​သို့မည်​ပုံလုပ်​ရမည်​ကို
ဖထီး​စောအယ်​ထူးမှ မှာကြားထား၏ ။သူက​တော့ လက်​စွဲ​တော်​ဒူး​လေးကြီးတကိုင်​ကိုင်​ဖြင့်​ ။
ထိုထက်​ထူးသည်​မှာ ကျဉ်းကျပ်​လှ​သောလင့်​စင်​​ပေါ်တွင်​ ဝါးကျည်​​တောက်​နှစ်​လုံးအား​တွေ့ကသဖြင့်​ ကျ​နော်​အံ့သြစွာ​မေးမိသည်​ ။
” ဖထီး. .အဲဒီကျည်​​တောက်​​တွေက ဘာလုပ်​မလို့လဲဗျ ”
” ​အေး… ငါမ​ပြောရ​သေးလို့​ဝေ့.. နင်​တို့အားလုံး ​သေး​ပေါက်​ချင်​ရင်​ ​အောက်​ကိုမပန်းချနဲ့​နော… အဲဒီကျည်​​တောက်​ထဲကို
” ဟာ..ဖထီးကလည်း ..မ​ပေါက်​တတ်​ပါဘူးဗျာ..​အောက်​ဆင်း​ပေါက်​မှာ​ပေါ့..ဒါနဲ့..
​အောက်​ကို​ပေါက်​ချရင်​ဘာဖြစ်​လို့လဲဗျ .. ”
ဖထီးမှာ အလွန်​စိုးရိမ်​​သွားသည်​လားမသိ …အ​လောတကြီးပင်​ ကျ​နော်​တို့အား ဆဲဆိုရင်း​ပြော​လေ​တော့သည်​ ။
” ဟာ.. ခွီး.. နင်​တို့ငါ​ပြောသလိုလုပ်​ဟ..​အောက်​ဆင်း​ပေါက်​ရင်​ နင်​တို့ကို​တောြောင်​​တွေက
​ဆော်​သွားမှာ​ပေါ့ … အ​ပေါ်က​တော့လုံးဝမ​ပေါက်​ချ​နဲ့​နော်​..
” ဘာဖြစ်​လို့လဲ ဖထီးရဲ့.. ”
” ဟာ…​တော်​​တော်​ခက်​တဲ့​ကောင်​​တွေဘဲ … အရှင်​ကြီးရဲ့လက်​​အောက်​ငယ်​သား​တွေက သစ်​ပင်​​အောက်​​တွေမှာရှိတယ်​ဟ…
နင်​တို့ ​သောက်​ရမ်းလုပ်​ရင်​ အရှင်​ကြီးစိတ်​ဆိုးပြီး
ကိုင်​ လိုက်​ရင်​ကိုယ်​ကျိုးနဲ့မယ်​​ဝေ့… မလုပ်​ကြပါနဲ့​​ကောင်​​လေးတို့ရာ… ”
သို့နှင့်​…. ကျ​နော်​တို့မှာ ဝါးကျည်​​တောက်​ထဲ ရှူရှူး​ပေါက်​ရမည်​စိူးသဖြင့်​
​နေ​နွေးကြမ်းကို​ မ​သောက်​ရဲသ​လောက်​ဖြစ်​​နေမိသည်​ ။
​ပြောပြ​​လေသည်​ ။အထူးသဖြင့်​ ချင်းမုဆိုးပါပါကြီးနှင့်​​တောလည်​ခဲ့ဖူး​သော
အ​တွေ့အကြုံများပင်​ ..။.(​နောင်​ အလျင်းသင့်​ပါကဖထီး​ပြော​သော​တောလိုက်​မုဆိုး
ကျ​​နော်​တို့အထဲတွင်​ ​မျောက်​ရှုံးတစ်​​ယောက်​မှာ သရဲအလွန်​​ကြောက်​တတ်​သော​ကြောင့်​
​တော​ခြောက်​​သောအ​ကြောင်းများ ၊ ​တောထဲမှဖုတ်​ တ​စ္ဆေ များအ​ကြောင်း​ပြော​သောအခါ
မျက်​နှာဇီးရွက်​​လောက်​ဖြင့်​ နား​ထောင်​​​နေ​တော့သည်​ ။ ယခင်​ကမ​ကြောက်​တတ်​​သော
ကျ​နော်​သည်​ပင်​ ကြက်​သီးထမိ​သေးသည်​ ။
ဖထီး​ပြောမှသိရသည်​မှာ ချင်းမုဆိုးပါပါကြီးမှာ ​တောမှားသဖြင့်​ လင့်​စင်​​ပေါ်မှ
ပြုတ်​ကျခဲ့ပြီး ခါးရိုးကျိုးခဲ့ရသည်​ ဟု ။ ကျ​နော်​တို့မှာ ထိုစဉ်​က​တော​မှောက်​ ၊
​တောမှား ၊​တော​ခြောက်​သည်​များကို မယုံတဝက်​ ယုံတစ်​ဝက်​ဖြင့်​နား​ထောင်​​
​နေရ​သော်​လည်း စိတ်​ဝင်​စားလွန်းသဖြင့်​ အိပ်​ငိုက်​ဖို့ပင်​​မေ့​နေ​တော့၏။
ည ၉ နာရီခန့်​အထိစကားဝိုင်းဖွဲ့ခဲ့​သော်​လည်း ​နေ့လည်​ကပင်​ပန်းခဲ့သည်​တ​ကြောင်း
မနက်​​စော​စောထပြီး ဂျိုးသိုက်​ရှာရမည်​ကတ​ကြောင်းတို့​ကြောင့်​ အိပ်​ရာဝင်​ခဲ့ကြပါသည်​ ။
ကျ​နော်​တို့ သုံး​ယောက်​၏ခါးပတ်​တွင်​ ​ကြိုးတစ်​​ချောင်းစီချည်​၍ လင့်​စင်​နှင့်​
တွဲဆက်​ထားရသည်​ ။အိပ်​​နေစဉ်​ ပြုတ်​ကျမည်​​စိုးသော​ကြောင့်​ပင် ။
ကျ​နော်​မှအပ အားလုံးနိူး​နေပြီဖြစ်​သည်​ ။ ​မျောက်​ရှုံးမှာဓာတ်​မီးကိုဆုပ်​ကိုင်​ပြီး ​ဆောက်​တည်​ရာမရ
တုန်​လှုပ်​​နေ​လေပြီ ။ ခတ်​​ဝေး​ဝေး ​တောင်​မြင့်​ကြီးဆီမှ ​ဝေါ .. ကနဲ အသံတစ်​ခုကိုကြားရသည်​ ။
​လေငြိမ်​​နေ​သော်​လည်း ​လေတိုက်၍ သစ်​ရွက်​လှုပ်​​သောအသံများကို
ဆက်​တိုက်​ ကြား​နေရသည်​ ။
ဖထီးလည်း တစ်​ခုခုကိုပွစိပွစိဖြင့်​ရွတ်​​နေ​လေပြီ ။
ရုတ်​တရက်​ ..မျိူးတင့်​မှ ကျ​နော့ကိုလက်​တို့၍ပြသဖြင့်​ကြည့်​လိုက်​​လေရာ …
ခတ်​​ဝေး​ဝေး ခြုံစပ်​​လောက်​တွင်​ အနီစက်​​လေးနှစ်​စက်​ ​ရွေ့လျား​နေသည်​ကို​တွေ့လိုက်​ရသည်​ ။
ဘာမှန်းညာမှန်းမစဉ်းစားနိုင်​ခဲ့ပါ။ ကြားဖူးခဲ့​သော​ ​တောအ​ကြောင်း ၊ ​တောင်​အ​ကြောင်း ​ကြောက်​မက်​ဖွယ်​များသာ
ပြန်​သတိယ​နေမိသည်​ ။ ကျ​နော်​လည်း ဂုဏ်​​တော်​ကိုးပါး ကိုရွတ်​ပါ​တော့သည်​ ။ သို့​သော်​ … ဘယ်​လိုရွတ်​ရွတ်​ တစ်​ခါမှကိုးပါးပြည့်​​အောင်​မရွတ်​နိုင်​ခဲ့ပါ ။
တစ်​ခြမ်းပဲ့ လ အ​ကွေး​လေး၏ မှုံဝါးဝါးအလင်း​ရောင်​သည်​ ညအ​မှောင်​ထုက်ို
အ​ရောင်​​ဖျော့ရုံမျှသာ … ။
ကျ​နော့်​မျက်​လုံးထဲတွင်​ စမ်း​ရေထွက်​​သော​နေ​ရာအနီး အရိပ်​တချို့လှုပ်​ရှား​နေသည်​ကို​တွေ့ရသည်​ ။ ​
​နောက်​မှ ပြန်​​ပြောကြ​သောအခါ မျိုးတင့်​လည်း​တွေ့လိုက်​သည်​ဟု….။
ကျ​နော်​တို့အဖွဲ့ ​တော​ခြောက်​ခြင်းများခံ​နေရ​လေပြီလား …
​မျောက်​ရှုံးကိုကြည့်​​သောအခါတွင်​ လက်​အုပ်​ချီ၍ ခွင့်​လွှတ်​ပါ… ခွင့်​လွှတ်​ပါ..ဟု အဆက်​မပြတ်​ရွတ်​လျှက်​
တဆတ်​ဆတ်​တုန်​​နေ​သည်​ကို ​တွေ့ရ​လေသည်​ ။
ထိုစဉ်​…. ရုတ်​တရက်​ အသံများ တိတ်​သွား​လေသည်​ ။
ယခုမှ သတိထားမိသည်​မှာ ပုတ်​အဲ့အဲ့အနံ့ပင်​ဖြစ်​သည်​ ။
ကျ​နော်​တို့အဖွဲ့သည်​ ဓတ်​မီးများ ဓား​မြှောင်​များကိုင်​ထား​သော်​လည်း
“ဝှီး…ဟီး..ဟီး..ဟီးးး …. ” ….
ထိုအသံသည်​ ​တောတန်းထိတ်​မှသည်​ ​တောင်​တန်းအမြင့်​ဖက်​သို့ ​အော်​မည်​​ရွေ့လျားသွားသံဖြစ်​သည်​။
ထို့​နောက်​… တဖန်​ပြန်​လည်​တိတ်​ဆိတ်​သွားပြန်​သည်​ ။
” ဟူး….. ​တော်​​သေးတာ​ပေါ့​ကောင်​​လေး​တွေရာ… ​တောစည်းကမ်းဆိုတာ
ယုံယုံ မယုံယုံ လိုက်​နာရတယ်​ကွ… ​ပြောကြစမ်း..ဘယ်​သူမဟုတ်​တာလုပ်​လိုက်​တာလဲ.. ”
ဖထီးမှ ကျ​နော်​တို့အား​စေ့​စေ့ကြည့်​၍​မေးပါ​တော့သည်​ ။
​နောက်​ဆူံး​တော့ .. တရားခံက ​မျောက်​ရှုံး​ဖြစ်​​နေ​လေသည်​ ။
ကျ​နော်​တို့အားလုံးအိပ်​​ပျော်​သွား​သော်​လည်း သူမအိပ်​နိုင်​​သေး ။
ညဦးပိုင်းက​သောက်​ထား​သော ​ရေ​နွေးကြမ်းက ဇာတိပြ​လေပြီ ။
ဖထီး​ပြောထားသဖြင့်​ ဝါးကိည်​​တောက်​ထဲတွင်​ ရှူရှူး​ပေါက်​​သော်​လည်း
ထိုဝါးကျည်​​တောက်​မှာ လင့်​စင်​​အောက်​သို့ ပြုတ်​ကျသွားခဲ့ရသည်​ ။
ထိုညက ​တော​ခြောက်​ခံရခြင်းသည်​ ဤသို့​သောအ​ကြောင်း​ကြောင့်​..ဟု ..
ဖထီးက​ပြော​လေ၏ ။ ကျ​နော်​ က​တော့သိပ်​မယုံလှပါ …။
သို့​သော်​ .. အံသြဖွယ်​အသံများ ၊ လှုပ်​ရှား​နေ​သောအရိပ်​များနှင့်​
ကျ​နော်​တို့ ဆက်​၍အိပ်​မရ​တော့ပါ ။ ည ၂နာရီ​ကျော်​​နေပြီဖြစ်​သည်​ ။
ယခုမှ သတိထားမိသည်​မှာ ကျ​နော်​သည်​ အာ​ခေါင်​ကွဲမတတ်​​ရေငတ်​​နေ​လေပြီ ။
​ရေ​နွေးကြမ်း​အေးစက်​စက်​ကို အသာမြိုချရင်း ဖထီး​ပြောပြ​နေ​သော
သူနှင့်​ ချင်းမုဆိုးပါပါကြီးတို့​တွေ့ကြုံခဲ့ရ​သော ​တော​ခြောက်​ခံခဲ့ရပုံများကို
အရသာခံလျက်​ နား​ထောင်​​နေမိပါ​တော့သည်​ ။
စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုနေပါမည် ချစ်သော ဦးဆာ
တွတ်ပီရဲ့စွန့်စားခန်းတွေကိုတော့ မပြတ်တမ်းအားပေးခဲ့တာမို့ တွတ်ဆာရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတောင်မျက်စိထဲကာတွန်းဆွဲသလိုမြင်ယောင်လာတယ်ဗျို့
ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင် တောထဲ ရောက်သွားသလိုပဲ
ကြက်သီးတောင် ထသွားတယ် ၊၊၊၊၊ ဟီးးးး
လူအညစ်အကြေးတွေက.. တိရိစ္ဆာန်တွေအတွက်.. အင်မတန်အန္တရယ်များသလို.. ဒုက္ခလည်းဖြစ်စေတာပါ..
ဆိုတော့.. အပေါ်က၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ.. တောထဲသွားရင်… လူတွေဘယ်လို..အညစ်အကြေးစွန့်ရမယ်သေသေချာချာရှင်းထားပါတယ်..။
ယူအက်စ်မှာတောနက်တယ်ဆိုတာမျိုးက.. နှစ်ထောင်ချီတောကြီးတွေဒီအတိုင်းထိမ်းသိမ်းထားသမို့.. မြန်မာပြည်တောတွေထက်.. အများကြီးပိုနက်ပါတယ်..။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး.. အရှည်ဆုံး..သက်တန်းအကြာဆုံးသစ်ပင်ကြီးတွေလည်း.. ရှိပေါ့..။
မြန်မာပြည်မှာတော့.. ခြောက်ပြီး.. ကြောက်အောင်လုပ်ထားရတာပေါ့…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. သူ့အရပ်နဲ့သူ့ဓလေ့လိုက်သလိုလိုရှိနေသလိုလိုပြောရင်းနဲ့ပဲ.. မြန်မာ့သစ်တောကြီးတွေ.. ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းခဲ့ပေါ့..။
ဒီဇတ်လမ်းကိုတော့ ဘာမှလဲမသိ ဘာမှလဲမပြောလိုပါဘူး….
ဒီဇတ်လမ်းထဲက ခါးကျိုးဖူးတဲ့ ချင်းလူမျိုးပါပါကြီး ချင်းလူမျိုးပါပါကြီးကိုယ်တိုင် သစ်သားဆုံနဲ့ထောင်းပြီးလုပ်တဲ့ ချင်းခေါပုတ် (အခုခေတ်ဈေးထဲရောင်းတဲ့ ခေါပုတ်မျိုးနဲ့ လုံးဝမတူ) ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်စားဖူးပါတယ်။
လနဲ့ချီခံအောင်လုပ်ထားပြီး အပေါ်ယံက မှိုတွေကို ဖယ်ပြီးစားရတာ။
ဒုတ်လေးနဲ့ထိုးပြီး ကင်စားရင်တော့ အားပါးပါး ကောင်းမှကောင်းပဲ…။
တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ရိုးသား သဘောကောင်းပြီး ချစ်ခင်စရာကောင်းသလို
တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာတွေဟာလဲ တစ်မျိုးစီ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်…။
တောတွင်းအတွေ့အကြုံ ဇာတ်လမ်းတွေ ငယ်ငယ်က တအားဖတ်ခဲ့တယ်။ အခု အဲဒီပုံစံမျိုး ပြန်ဖတ်ရတော့လည်း အရသာ မပျက်ဘူး။ လျှို့ဝှက်သည်းဖို ဆိုတော့ လူကို ညှို ငင်နိုင်စွမ်းကြီးတယ်။ စောင့်ဖတ်ရတော့မယ့် စာပဲ ဦးဆာရေ့။
အရင်က ဂျိုး အမတေတို့ အကောင်အမတေတို့ဆို လိုက်လို့ရှိရင် အဲအကောင်တွေ အားဂျီးများဂျီး မွေးပြီးရှာလို့မရဘူးလားလို့ စဉ်းစားဘူးတယ်။
အာ့ဆို တောထဲက မိန်းမတွေ မလိုက်သင့်ဘူးပဲ။ (ဒစ်ခွစ်မနိတ်လုပ်တာဟုတ်ဖူးနော်)
အဲဒါမျိုးကျ ဒစ်ခွစ်မနိတ်လုပ်ပါစေ။မိန်းမဆိုတာ အားငယ်တတ်တယ်လေ။
ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးတွေ မဖတ်ဖြစ်တာ နှစ်နဲ့ချီပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်။
အခု ဦးဆာရေးထားတာ ဖတ်တော့
အဲဒီတုန်းက ခံစားချက်မျိုးလေးတွေ ပြန်ရလာတယ်။
ကျနော်လဲ သည်းထိတ်ရင်ဖို စွန့်စားခန်းတွေ ကြိုက်မိဆဲ ပါလား……….
မိန်းကလေးဆိုရင် ဝါးကျည်တောက်နဲ့တော့ မဖြစ်ဘူး ထင်တယ်နော် ဦးဦးဆာမိ။